World Archives - Page 3 of 37 - Puntland Mirror Believable Media Website
[ April 20, 2019 ] Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Jubbada Hoose	Somalia
[ April 20, 2019 ] Former Puntland Parliament speaker dies	English News
[ April 20, 2019 ] Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo geeriyooday	Puntland
[ April 19, 2019 ] Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland oo laga yaabo in ay kulan ku yeeshaan Dubai	Puntland
June 12, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Singapore-(Puntland Mirror) Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo xafiiska fadhiya iyo hoggaamiyihii Waqooyiga Kuuriya ah oo kulma kadib muddo sanad ah oo ay is-dhaafsanayeen hanjabaadyo. Labada masuul […]
Trump oo ka baxay heshiiska nukliyeerka Iran
May 9, 2018 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu ka bixi doono heshiiskii Obama ee Nukliyeerka Iran. Isaga oo ugu yeeray mid “caajis ah oo qurun ah” ceebna ku ah isaga oo muwaadin ah. […]
May 1, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Tehran-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu isku dayayo in uu dab ku shido dhibbaatooyinka gobolka isaga oo ku boorinaya saaxiibkiisa Sucuudi Caraabiya in uu kahor tago Tehran. Hadal uu […]
Masar, Suudaan iyo Itoobiya oo ku guuldareystay in ay heshiis ka gaaraan muranka wabiga Niil
April 7, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Khartuum-(Puntland Mirror) Wasiiradda Arrimaha Dibada Suudaan, Masar iyo Itoobiya ayaa ku guuldareystay in ay heshiis ka garaan muranka ka saabsan biyo xireenka balaaran ee Itoobiya ee wabiga Niil, sida ay sheegeen Wasirraddu Jimcaddii. Masar ayaa […]
Ciidamada ammaanka Faransiiska oo toogtay nin hubeysan oo saddex qof dilay
March 23, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Paris-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Faransiiska ayaa toogtay nin saddex qof ku dilay koonfurta Faransiiska, sida maanta oo Jimce ah uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha Faransiiska. Ninka hubeysnaa ayaa soo afduubtay gaari kadibna waxa uu afduub […]
Trump oo Xoghayihii Arrimaha Dibada Rex Tillerson shaqada ka ceyrshay
March 13, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Talaado ah xilka ka qaaday Xoghayihii Arrimaha Dibada Rex Tillerson, waxaana badali doona agaasimaha CIA, Mike Pompeo. Donald Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ugu mahadceshay Tillerson shaqada […]
February 17, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Abuja-(Puntand Mirror) Saddex qof oo isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay suuq kalluun oo kuyaala magaalada Konduga ee waqooyiga-bari ee dalka Nayjeeriya maanta oo Sabti ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 qof, sida ay […]
February 15, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in uu go’aan ku gaaray in iscasilo, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda IItoobiya ee ENA maanta oo Khamiis ah. Hailemariam Desalegn ayaa sheegay […]
February 14, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Johannesburg-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika, sargaal sare oo katirsan xisbigiisa MDC ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters. Tsvangirai oo 65-sanno jir ahaa, […]
February 11, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Moscow-(Puntland Mirror) Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa burburtay maanta oo Axad ah kadib markii ay kasoo muuqan weyday shaashadaha raadaarka, sida ay sheegeen warbixinadu. Diyaaradda ayaa […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa saakay oo Sabti ah ku geeriyooday magaalada Garoowe, sida eheladiisa iyo ilo-wareedyo katirsan baarlamaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Cabdirashiid ayaa maalmihii [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah soo saartay war-saxaafadeed ay uga jawaabayso hadalkii wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Wasiirka Waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Bare ayaa Arbacadii sheegay in Puntland ay [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay kulan casho sharaf ah ugu sameeyay Muqdisho ciyaartowga kubada cagta Puntland ee ka qeyb galaya tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya. Madaxweyne Cabdiweli ayaa dhalinyatada ciyaartowga ah [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Isniin ah tagay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Madaxweynaha ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Boosaaso maamulka gobolka Bari iyo [...]